Otu esi akpọ aha Dinosaur
Ụmụ anụmanụ na ọdịdị Basics
Ọtụtụ ndị na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na-enweghị ohere ịkpọ aha dinosaur ha. N'ezie, maka akụkụ ka ukwuu, paleontology bụ ọrụ na-enweghị atụ na nke dị egwu - onye na-ahụkarị PhD na-etinye ọtụtụ n'ime ụbọchị ya n'ọrụ iji wepụsịsị ájá ndị sitere na ihe odide ndị a chọtara ọhụrụ. Ma otu oge onye ọrụ ubi na-enwupụta ìhè bụ mgbe ọ na - achọta - ma nweta aha - dinosaur ọhụrụ.
(Lee aha 10 kasị mma Dinosaur , aha 10 dinosaur dị njọ , na mgbọrọgwụ Gris eji eji aha ndị Dinosaur )
E nwere ụdị ụzọ niile ị ga - esi akpọ dinosaur. A na - akpọ aha ụfọdụ n'ime mkpụrụ ndụ kachasị amara aha na njirimara (ihe atụ, Triceratops , Grik maka "ihu mpi atọ," ma ọ bụ Spinosaurus , "spiny lizard"), ebe a na - akpọ ndị ọzọ dị ka àgwà ha chere (otu n'ime ihe kachasị ihe a ma ama bụ Oviraptor , nke pụtara "onye ohi ohi," ọ bụ ezie na ebubo ndị ahụ mesịrị mee ka ọ bụrụ ihe na-adịghị mma). Obere ihe a na-eche n'echiche, ọtụtụ aha dinosaur ka a na-akpọ aha na mpaghara ebe a chọtara ọdịdị ha - na-agba àmà Edmontosaurus Canada na Argentinosaurus nke South America.
Aha aha, Ngalaba aha, na Iwu nke Paleontology
A na-akpọkarị dinosaurs akwụkwọ sayensị na ụdị aha ha na ụdị aha ha. Dịka ọmụmaatụ, Ceratosaurus na- abịa na nkwenkwe dị iche iche anọ: C. nasicornus , C. dentisulcatus , C. ingens na C. roechlingi .
Ọtụtụ ndị mmadụ nkịtị nwere ike inweta site na ịsị "Ceratosaurus," ma ndị ọkà mmụta ihe gbasara anụ ahụ na-ahọrọ iji ụdị ọdịdị na ụdị aha ahụ, karịsịa mgbe ị na-akọwa ihe ndị ọzọ. Ọtụtụ mgbe ka ị na-eche, ụdị ụdị dinosaur a "na-akwalite" na ọdịdị nke ya - nke a emeela ọtụtụ ugboro, dịka ọmụmaatụ, na Iguanodon , ụfọdụ ụdị ndị mbụ a na-akpọ ugbu a dị ka Mantellisaurus, Gideonmantellia na Dollodon .
Dika iwu akwukwo ihe ndi ozo si di, aha mbu nke dinosaur bu nke na-adi. Dịka ọmụmaatụ, onye ọkà mmụta ihe ochie nke chọpụtara (ma aha ya) Apatosaurus mesịrị chọpụta (ma aha ya) ihe ọ chere dịka dinosaur dị iche, Brontosaurus. Mgbe e kpebisiri ike na Brontosaurus bụ otu dinosaur ahụ dịka Apatosaurus, ikike ikike ọchịchị laghachiri n'aha mbụ ahụ, na-ahapụ Brontosaurus dị ka ụdị "mbupụ". (Ihe dị otú a anaghị eme naanị dinosaur, dịka ọmụmaatụ, ọhụụ oge ochie nke a maara dị ka Eohippus na-aga site na Hyracotherium na-enweghị onye ọrụ ya.)
Ee, a pụrụ ịkpọ Dinosaurs aha mgbe ndị mmadụ gasịrị
N'ụzọ dị ịtụnanya, ọ bụ mmadụ ole na ole ka a na-akpọ dinosaurs aha, ma eleghị anya n'ihi na ịchọrọ ihe na-abụ otu ìgwè na ọtụtụ ndị ọkachamara anaghị achọ ịmasị onwe ha. Otú ọ dị, ụfọdụ ndị ọkà mmụta sayensị a ma ama, bụ ndị a na-asọpụrụ n'ụdị dinosaur: dịka ọmụmaatụ, aha Othnielia bụ Othniel C. Marsh (otu ọkà mmụta ihe ọmụmụ nke na-eme ka apatosaurus / Brontosaurus dum), ebe ọ bụ na onye na- aṅụ ihe abụghị onye na-aṅụ mmanya, ma dinosau akpọ aha ya n'agbata narị afọ nke narị afọ nke 19 (na onye na Marsh) na Edward Drinker Cope . Ndị ọzọ "ndị mmadụ" na-agụnye Piatnitzkysaurus na Becklespinax .
Ikekwe ndi mmadu a maara nke oma bu ihe ndi ozo nke oge a bu Leaellynasaura , nke ndi di na nwunye choro n'Australia choputara na 1989. Ha kpebiri ime aha umuaka a di nwayi ma obu nwata mgbe mbu nke a na-asọpụrụ na ụdị dinosaur - ha weghachite azụ ahụ mgbe afọ ole na ole gafere Timimus, otu ornithomimid dinosaur aha ya bụ di nke onye a ma ama. (N'ime afọ ole na ole gara aga, e nweela ọtụtụ dinosaur aha ndị inyom , na-edozi oge na-adịchaghị anya n'akụkọ ihe mere eme.)
Ndị Kasị Mgbu, na Ihe Kasị Mmasị, Names Dinosaur
Onye ọ bụla na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ, o yiri, na-eburu ọchịchọ nzuzo na-abịa aha dinosaur dị oke mma, dị oke omimi, na dị nnọọ na-dị jụụ na ọ na-eme ka ọtụtụ nyocha mgbasa ozi. Afọ ole na ole gara aga agbachara anya dịka Tyrannotitan, Raptorex na Gigantoraptor , dịka Tyrannotitan, Raptorex na Gigantoraptor , ọ bụrụgodị na ndị dinosaurs gụnyere adịghị mma karịa ka ị ga-eche (Raptorex, dịka ọmụmaatụ, bụ naanị ihe mmadụ toro eto, Gigantoraptor adịghị ọbụna ezi onye nduzi, ma onye ikwu nke Oviraptor).
Aha ezighi ezi dinosaur - ma ọ bụrụ na ha nọ n'ime oke ezi uto, n'ezie - ha nwekwara ebe ha na-anọ n'ụlọ nsọ ndị dị nsọ nke paleontology. Eleghị anya ihe atụ a ma ama bụ Irritator, bụ nke natara aha ya n'ihi na onye ọkà mmụta ihe ochie na-ebigharị akụkụ ya na-emetụ n'ahụ, nke ọma, karịsịa iwe na ụbọchị ahụ. N'oge na-adịbeghị anya, otu ọkà mmụta ihe ochie na-akpọ mpi ọhụrụ, nke a na-akpọ Mojoceratops (mgbe m kwusịrị "mojo" na okwu a bụ "M na-arụ ọrụ m"), ka anyị ghara ichefu Drakinax hogwartsia , mgbe usoro Harry Potter, site na ndị ọbịa na-aga n'ihu na Ụmụaka Museum nke Indianapolis!
Esi sụgharịa aha aha dinosaur
Kedu ihe bụ onye na-ahụ maka mmiri?
Ndị Dinosaurs na ndị Nkọwapụta nke Tennessee
The Dinosaurs nke na-egbuke egbuke Ụdị
Ndi Dinosaur 10 kachasị
Ụmụ anụmanụ dị mkpa nke North America
Kedu Umu Anumanu Anumanu Na E Nwere?
10 Na-eyi egwu egwu ndụ
Uzo aha Dinosaur 10 di iche iche
Ndi Dinosaur na ndi ozo nke Spain
Ndị Dinosaur na Ndị Na-ahụ Maka Ọdịnihu nke South Dakota
Nri Ndị Rom - Ihe Ndị Rom Na-eme
Ogbugba akwukwo nke ndi dere akwukwo iji dee akwukwo nke akwukwo di elu
Otu esi esi egwu mmiri 200
Geography nke Andorra
Ihe omuma na ihe omuma banyere David, eze ochie
Ihe niile banyere ụlọ ọcha White House
ESL Quiz: Ịdị na Egwuregwu
Ịdị na Asụsụ
Eziokwu Banyere Zoo Virus
Mụta banyere nbanye na mmepụta na C ++
Band nke San Francisco
Ì Kwesịrị Ịtụ Egwu Ndị Mmụọ?
Ihe nlele ngwa ngwa - Porkopolis
Nghọta nke Scott Scott Fitzgerald maka "Akwa Gatsby"
Mahadum nke North Carolina Chapel Hill Photo Tour
Abụ nke 10 nke 1985
Na-egwu Straddle na Poker
Eastern Cottonwood, Osisi Osisi Top 100 n'Ebe Ugwu America
Amụma America: Ebe obibi nke Fort Ticonderoga (1777)
Nkwupụta Nzuzo Na Na
4 Ụdị Ịhụnanya n'Akwụkwọ Nsọ
Gini ka Ogugu nke Qin yiri?
K-3-K-4 Visa mara mma nke ọma para cónyuge e hijastro de ciudadano
Oge usoro iheomume nke 20th Century
Egwuregwu Clausius-Clapeyron Ihe Nlereanya Nlereanya